PLA စာရွက် မှအကောင်းဆုံး PLA စာရွက် မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
SHANG SHIEN CHENG INDUSTRY CO., LTD. ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့မှာအရည်အသွေးတစ်ခုအကွာအဝေးပါဝင်ပတ်သက်သည် PLA စာရွက် စက်ရုံအတွက် Taiwanစျေးကွက်အတွက်အတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းရှိခြင်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေးစားရောင်းချသူအခြေစိုက်စခန်းထံမှဖြစ်ပြီးရရှိလာသောကြောင်းတန်းမြင့်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းကို အသုံးပြု. ထုတ်လုပ်ထားတဲ့။ ဤချွေတာဈေးနှုန်းများမှာတင်ပို့နှင့်နိုင်ငံတကာအရည်အသွေးစံနှုန်းများကိုတန်းတူမှာရှိပါသည်။ ကျနော်တို့ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေး, စိတ်ကြိုက်, လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုအဆင့်ဆင့်, ငါတို့ကျွမ်းကျင်လုပ်သားဝန်ဆောင်မှုပေါ်မှာငါတို့အာရုံစူးစိုက်မှုကြောင့်ရှိသည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ပုံစံ - PLA Single use -10
၁၀၀%biocompostable PLA စာရွက်
၂၀၂၁ ဇူလိုင်လမှ,အီးယူဈေးကွက်သည်ပန်းကန်ခွက်ယောက်များကိုလုံးဝပိတ်ပင်လိမ့်မည်(ဓားများ,ခက်ရင်း,ဇွန်း,တုတ်ကောက်),ညစာပန်းကန်,ကောက်ရိုးများ,cotton swab များ,ဖျော်ရည်ချောင်းများ,မီးပုံးပျံချောင်း,styrofoam အစားအစာကွန်တိန်နာများ,အချိုရည်ဘူးများနှင့်အဖျော်ခွက်များ.လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသုံးပြုမှု
အကောင်းဆုံး PLA စာရွက် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် PLA စာရွက် ၏အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊